Lọ ihe atụ nke Bible - WRSP
ỌM OFM OF NKE BIBLE
1941: David Green mụrụ na Emporia, Kansas.
1964: Steven Green mụrụ David na Barbara Green.
1970: Ejiri ntọala Greco.
1972: Emebere Hobby Lobby na Oklahoma City.
1976: Hobby Lobby mepere ụlọ ahịa mbụ ya na mpụga Oklahoma City.
1981: Steven Green, nwa David Green, ghọrọ onye isi na Hobby Lobby.
2009: Steven Green malitere ịmepụta nchịkọta ihe ochie.
2011: Edere amaokwu ndị dị na Oklahoma City Museum of Art.
2012: Akụkụ zụrụ Washington Design Center.
2017: Ebe a na-emechi ihe ngosi nke Bible ga-emeghe.
A mụrụ David Micah Green n'ezinụlọ dara ogbenye na Emporia Kansas na November 13, 1941. Ezinụlọ ahụ dara ogbenye na ọ dabere na onyinye nri na uwe (Solomon 2012). Nna ya bụ pastọ, na na a ike okpukpe ezinụlọ, David Green bụ naanị otu n'ime ụmụnne isii ndị na-aghọghị ụkọchukwu na ụka Chukwu nke Amụma (Grossman 2014). A kọrọ na ọ bụ nwa akwụkwọ mediocre na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma mesịa rụọ ọrụ dị ka nwata nwoke na-ere ahịa na lelọ Ahịa General nke McClellan. Mgbe ọ gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ rụrụ ọrụ na Air Force Reserve, rụọ ọrụ dị ka onye njikwa na ụlọ ahịa TG & Y dime dị na mpaghara, wee lụọ obi ụtọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị, Barbara (Solomon 2012). Di na nwunye ahụ nwere ụmụ atọ, abụọ n'ime ha mechara bụrụ ndị isi na Hobby Lobby. Na 1970, David Green guzobere Ngwaahịa Greco, na-emepụta obere eserese eserese na ụgbọala ya. Afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ mepere oghere Hobby Lobby mbụ ya na Oklahoma City. The Hobby Lobby yinye toro ngwa ngwa: rue ulo ahia asaa site na 1975, ulo ahia iri na ise site na 1989, ulo ahia otu site na 1995, ulo ahia abuo site na 1999, ma ugbua kariri ulo ahia ise na kariri iri ano.
David Green emeghewo na-ekwu na ọ bụ Chineke na-enwe ihe ịga nke ọma na Hobby Lobby. Dịka o kwuworo, "Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ma ọ bụ ọ bụrụ na m nwere ihe ọ bụla, ọ bụ n'ihi na Onye Okike anyị enyela anyị" (Grossman 2012). Ọ na-akọwa onwe ya dị ka onye nlekọta ụlọ: “” Nke a abụghị ụlọ ọrụ anyị. Nke a bụ ụlọ ọrụ Chineke. Gịnị ka anyị ga-eme? Anyị ga-arụ ya dịka ụkpụrụ O nyeworo anyị n'okwu Ya "(Grossman 2012). A na-ahụ mmetụta okpukpe na Hobby Lobby outlets. Ha na-egwu egwu nke ndi Kraist na ulo ahia, igba oso na agbakwunyere akwukwo ndi gbara Krismas na Ista, mechie ulo ahia ha na Sọnde ka ndi oru ha wee nwee ike iga na ofufe, ma debe ndi isi nchuaja ano na ugwo ulo oru. Hobby Lobby emewokwa ka ụgwọ ọrụ opekatampe maka ndị ọrụ oge niile kwa afọ, na-ewetara ya karịa nkezi mba, maka ebumnuche okpukpe. Green kwuru na "ọ bụ naanị ihe dị mma:" Chineke gwara anyị ka anyị gaa n'ụwa ma kuziere ihe niile ekere eke Oziọma. Ọ naghị ekwu skim n'aka ndị ọrụ gị ime nke ahụ ”(Solomon 2012).
David Green edepụtara dị ka otu n'ime ndị America kachasị baa ọgaranya 100 nwere ihe karịrị $ 4,000,000,000 na akụnụba ("World Billionaires" 2015). Onye ndu nke Hobby Lobby na Museum nke Bible na-agafere nwa David Green na onye isi ụlọ ọrụ Steven Green. Amụrụ na 1964, Steven Green bụ onye Southern Baptist na nwa nwa na nwa nwanne nke ndị ụkọchukwu Pentikọstal. O zutere nwunye ya, bụ Jackie, na ogige ụlọ ụka ndị Greens nwere ụmụ isii gụnyere nwa nwanyị a nakweere na China (Grossman 2014).
David Green bụ onye a na-akọ na ọ bụ ya kacha enye onyinye na ọrụ mgbasa ozi na US ma mee ka nkwa Ndị Kraịst ya bụrụ akụkụ a na-ahụ anya nke ọdịbendị ụlọ ọrụ. N'ezie, Hobby Lobby na-ekenye ọkara nke ego pretax niile a na-akpata na ihe ndị na-akpata ozioma. Hisfọdụ n’ime atụmatụ ya bụ nkesa ihe karịrị otu nde akwụkwọ nde akwụkwọ Oziọma niile na Africa na Eshia, akụkụ Akwụkwọ Nsọ maka ụmụaka site n’aka OneHope Foundation, nkesa “obere akwụkwọ nta” nke Akwụkwọ Nsọ na mba ndị dara ogbenye gburugburu ụwa, yana ngwa Akwụkwọ Nsọ maka ekwentị iji nye ederede dị n’ihe karịrị otu narị asụsụ (Solomon 1,000,000,000). Otu isi ihe mere David Green ji bụrụ onye ama ama n’etiti ndị ụka bụ onyinye ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ. N'ime onyinye ya bụ onyinye $ 2012 na Mahadum Oral Roberts na 70,000,000, $ 2007 na Mahadum Liberty, na $ 10,500,000 na Zion Bible College.
Mmepụta nke ebe ngosi ihe mgbe ochie dị na Bible bụ nrọ ogologo oge nke ezinụlọ Green dabeere na Oklahoma. Enwere ike ịchọta ọhụụ a na akwụkwọ ntinye akwụkwọ na-enweghị uru ya. Dịka ọmụmaatụ, na 2011, e kwuru na ebumnuche nke ụlọ ngosi ihe nka dị ka: "Iji mee ka Okwu Chineke dị ndụ dị ndụ, ịkọ akụkọ na-akpali akpali nke nchekwa, na iji kpalite obi ike na ikike zuru oke na ntụkwasị obi nke Akwụkwọ Nsọ" (Caplan- Bricker 2014; Boorstein; 2014). N'ihi na David Green, “Ọ bụ Chineke, ọ bụ akụkọ ihe mere eme, na anyị chọrọ na-egosi na” (Solomon 2012). Ọ na-ekwusi ike na ebumnuche ahụ abụghị ime ka ndị mmadụ tọghatara ndị mmadụ na ọ bụghị iji mee ka ndị mmadụ tọghatara okpukpe ha kama ọ bụ naanị ime ka ndị ọbịa mara banyere akwụkwọ Chineke: “Anyị ga-achọ ịkpọ mmadụ niile ka ha bịa mụọ maka akwụkwọ ahụ metụtara ụwa anyị niile. Yabụ ọchịchọ anyị bụ itinye aka na mmadụ niile. Ọ bụ akwụkwọ nwere nnukwu mmetụta. Ọ na-agbagha. Ọ hụrụ ya n'anya. Ọ na-asị. Anyị na-eche na ndị mmadụ kwesịrị ịma maka ya ”(O'Connell 2015). Dị ka ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze nke Green goro ọrụ iji kpọsaa ụlọ ngosi ihe nka a na-eme atụmatụ tinye ya, ebumnuche bụ “igosipụta Agba Ochie na Agba Ọhụrụ, ikekwe akwụkwọ akwụkwọ kachasị mkpa n'ụwa, site na usoro na-abụghị nke ịrọ òtù, nke ndị mmụta nke mere akụkọ ihe mere eme, akwụkwọ mmụta na mmetụta nke Akwụkwọ Nsọ na akụkụ ọ bụla nke ọha mmadụ nwere ike ịnweta ”(Lindsey 2014). Green nwere obi ike banyere ihe ga-esi na ya pụta: “Gịnị mezie? Nke ahụ ọ bụ njedebe nke ndụ, ịkpatakwu ego na iwulite ihe? ” Green jụrụ, zaa ugbua na aka. “Maka m, Achọrọ m ịma na emetụtala m ndị mmadụ ruo mgbe ebighị ebi. Ekwere m na m. Ekwenyere m na mgbe mmadụ matara Kraịst dị ka onye nzọpụta nke onwe ha, emetụtala m mgbe ebighi ebi ”(Solomon 2012).
Isi mmalite nke ga-abụ ebe ngosi ihe mgbe ochie nke Bible mere na 2009 mgbe David Green malitere ịchọ ụwa maka oge ochie ihe odide dị nsọ. O jiri ihe karịrị $ 30,000,000 mee ihe mbụ ya, ọ bụ ezie na ihe ndị ahụ bara uru ọtụtụ oge na mmefu mbụ (Rappeport 2014). Ihe ngosi mbụ nke ihe ndị na-eto eto na-eto eto dị ka "Passages," ihe ngosi njegharị. Ihe ngosi mmeghe mere na 2011 na Oklahoma City Museum of Art; ngosi sochiri Atlanta, Charlotte, Colorado Springs, na Springfield. Ihe ngosi ndi ahu gunyere ihe ndi di ka ihe omimi nke ihe omuma nke akwukwo nso, mmegharia nke akwukwo nso nke ndi mọnk, na ihe omuma nke akuko banyere akuko nke Noa (Rappeport 2014). Emechara ka ebe ndi ozo di na nnukwu ihe ngosi ihe omuma nke Baibul. A na-ahazi mkpebi gbasara nnweta site n'aka Green Scholars Initiative (GSI), nke gụnyere ndị mmụta na ndị ndụmọdụ sitere n'ọtụtụ mahadum ndị a ma ama na mba ụwa na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-emesapụ aka. GSI na-enyekwa “usoro nhọpụta nke Akwụkwọ Nsọ maka ụmụ akwụkwọ kọleji” (Lindsey 2014).
E nwere ụfọdụ arụmụka izizi banyere ebe kacha dabara adaba maka ụlọ ihe ngosi nka a chọrọ, mana Washington, DC mechara bụrụ họọrọ maka "ndị njem nleta, ọdịbendị ihe ngosi nka siri ike na profaịlụ mba" (Rappeport 2014). Na 2012, Museum of the Bible, aha iwu nke ntọala Green zụrụ ụlọ 400,000 nke ụkwụ anọ bụ nke bụbu ụlọ nkwakọba ngwa ngwa na mgbe ahụ Washington Design Center maka $ 50,000,000 (Rappeport 2014). Lọ ahụ dị naanị ise ise na ise site na US Capitol. Ọ bụ ezie na a na-akpọ ya ebe ngosi nka nke Bible mgbe Green mechara ntọala, ụlọ ọrụ ihe ngosi nka emebeghị ka akpọ aha ya. Abụọ abụọ dị na Green Initiative bụ ihe mebere na Museum of the Bible.
Dabere na ndị njikwa nchịkọta, mkpokọta ahụ niile nwere "ihe karịrị ihe ochie 40,000 [ma] gụnyere ụfọdụ n'ime akwụkwọ akwụkwọ nsọ na oge gboo bara ụba ma baa uru… gbakọtara n'okpuru otu ụlọ" (Lindsey 2014). A ga-ahazi nchịkọta a ụzọ atọ, na-egosi akụkọ ihe mere eme nke Akwụkwọ Nsọ, akụkọ ndị dị na Baibul, na mmetụta nke Akwụkwọ Nsọ. N’elu ụlọ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie, a ga-ahụ “Ogige Akwụkwọ Nsọ” nke ga-enwe ndụ ihe ọkụkụ nke Akwụkwọ Nsọ. Nnukwu nchịkọta ahụ gụnyere ihe ndị dị ka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke Mpịakọta Osimiri Nwụrụ Anwụ, Torah, akwụkwọ nsọ ndị e dere na mpempe akwụkwọ papaịrọs; otu mbipụta nke Agba Ọhụrụ nke Wycliffe; otu iberibe Agba Ọhụrụ Tyndale; otu akụkụ nke Bible Gutenberg; ihe ndi Martin Luther nwere; na nsụgharị mbụ nke King James Bible (O'Connell 2015). Ikekwe ihe e ji mara mkpokọta ahụ bụ Codex Climaci Rescriptus, ihe odide ndị nwere ihe odide Agba Ọhụrụ na Aramaic Palestine, asụsụ ezinụlọ Jizọs. Ihe edere n’akwukwo banyere okwu nke Jisos n’elu obe, “Chinekem, Chinekem, gini mere I ji rapu m?” ("Eli, Eli, lema sabachthani") (Boorstein 2014). N’ime ọnwa isii nke mmeghe ya, ebe ihe ngosi nka dọtara mmasị karịa ndị ọbịa 500,000 ma karịa ọnụ ọgụgụ ndị bịara nke ụfọdụ ebe ngosi ihe mgbe ochie nke Washington maka oge yiri (Zaumer 2018)
Hobby Lobby ghọrọ aha ụlọ mgbe David Green megidere ọha na eze na Nchedo Ndidi na
Iwu Nlekọta Dị Oké Ọnụ n'ihi na ọ nwere ndokwa nyere ndị ụlọ ọrụ iwu ka ha nye usoro nlekọta ahụike nke gụnyere ụfọdụ ụdị njikwa ọmụmụ. Hobby Lobby na-elekọta ụlọ ọgwụ nlekọta ahụike na-akwụghị ụgwọ maka ndị ọrụ n'isi ụlọ ọrụ ya ma na-enye ndị ọrụ mkpuchi yana mkpuchi gụnyere ọtụtụ ụdị mkpuchi mgbochi. Otú ọ dị, ụlọ ọrụ ahụ nwere ngwaọrụ intrauterine na mkpụrụ ọgwụ “ụtụtụ-ụtụtụ” nke nwere ike “igbochi akwa na-etolite etinyere n’ime akpa nwa” (Grossman 2014). Ihe omume Hobiiii gbara akwụkwọ megide gọọmentị etiti maka iwu mgbochi afọ ime nke thelọikpe Kasị Elu nụrụ. Na June 30, 2014, Courtlọikpe Kasị Elu kpebiri na mmasị Hobby Lobby na mkpebi 5-4 dị nso na "ụlọ ọrụ ngwaahịa" ejidere "nwere ike ịhapụ iwu (Grossman 2014; Boorstein 2014). Courtlọ ikpe ahụ kpebiri na ọ bụghị na Ndezigharị Mbụ ahụ kama ọ dabere na Iwu Mweghachi Nnwere Onwe Okpukpe. Ọ bụ ezie na ndị nkwusa ozioma nabatara ihe si na ya pụta, ikpe ahụ kpaliterekwa nchegbu n'akụkụ ndị ọzọ na a ga-etinyekwa usoro ụka okpukpe na Museum of the Bible. N'ezie, Steven Green zoro aka na Bible dịka "akwụkwọ akụkọ a pụrụ ịdabere na ya" na "Mba a nọ n'ihe ize ndụ n'ihi amaghị ihe Chineke kụziri" (Rappeport 2014). Thelọ ihe ngosi nka ọ ga - arụ ọrụ dị ka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ma ọ bụ mgbakwunye nke ozi ala ọzọ?
Remainfọdụ ndị nkatọ na-ejighị n'aka. Lindsey (2014) ekwuola na ụlọ ihe ngosi nka na-egosi na akụkọ ihe mere eme nke Akwụkwọ Nsọ na ihe nketa mba bụ akụkụ nke akụkọ a na-ahụkarị nke ka na-apụta. Agha ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke oge a pụtara nnọọ ìhè dị ka “ihe odide zoro ezo” nke ozi bụ́ isi nke “mbibi a na-apụghị ibibi ebibi” nke Bible — dị ka ụzọ ọzọ ọ pụtara isi pụtakwuo. Ọ na-akọwa, sị:
Lọ ihe ngosi nka na-ebu arụmụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị site na ndị na-ekwuchitere ya dị iche iche-Martin Luther, Anne Boleyn, St. Jerome-ndị na-agwa ndị na-ege ntị okwu ozugbo ma ọ bụ ihe ngosi vidiyo ma ọ bụ animatronics na ndị na-agba akaebe banyere omume ọma ejima nke ịnweta na ikike onye ọ bụla n'okwu banyere nkọwa Akwụkwọ Nsọ. O doro anya na amaokwu ndị a bụ ndị Protestant n'echiche, na-akọwapụta akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị Juu dị ka akụkọ na-ezughị ezu nke Akwụkwọ Nsọ Ndị Kraịst ma na-agbagha oke akụkọ ihe mere eme nke ndị Juu-n'agbanyeghị agbanyeghị nso nso a-banye na "oge gara aga" na-agbagha. Otu ihe ngosi emere na mbido ihe ngosi a, na - esi na mpempe akwụkwọ papyrus nke narị afọ mbụ na - agagharị na mpempe akwụkwọ Torah nke narị afọ nke iri na iteghete na - enweghị ntụnyere narị afọ nke ọdịnala, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma ọ bụ nkwenkwe okpukpe. A na-egosikwa akụkọ ihe mere eme nke Katọlik dị ka akụkọ ihe mere eme, juputara na ederede na-ezighi ezi, nkwupụta ụma, na nsụgharị mmanye nke Ndozigharị ahụ mezigharịrị site na nsụgharị asụsụ obodo nke "ndị dị ka anyị nwere ike ịghọta," dịka nwanyị na-arụrụ ala na-arịọ onye agbata obi ya na-enweghị nkwenye na ngosi vidiyo ; na ikike nkà mmụta okpukpe nke ịkọwa onye ọ bụla, dị ka Martin Luther na-akọwa na arụmụka vidiyo ebumpụta ụwa ya na Desiderius Erasmus na Johann Eck nọ na “Thelọ ihe nkiri Ndozigharị”. Edere usoro dum nke akụkọ ntolite ọdịda anyanwụ n'ime akụkọ mmekọrịta nke ọmụmụ nnwere onwe.
N'akụkụ nke ya, Green enweghị ụdị ọdịdị ọ bụla na Creation Museum ma ọ bụ mbọ ọ bụla iji ụlọ ngosi ihe nka dị ka ngwa ọrụ maka izisa ozi ọma. Okwuru na “Anyi ekwughi otutu ihe banyere akwukwo a. Ọ bụ ihe mkparịta ụka dị elu banyere akwụkwọ a, gịnị bụ akụkọ ihe mere eme ya na mmetụta ya na ihe bụ akụkọ ya ”(O'Connell 2015; Sheir 2015). Otu ihe ngosi nka ewerela ịkwado onyinyo ya bụ ịkpọ onye mmụta David Trobisch ịkpọtụrụ na nhọpụta nke ihe ndị a ga-egosipụta na ebe ngosi ihe mgbe ochie ma jikọta ya na mahadum na ndị mmụta ama ama (Van Biema 2015):
Onye bụbu prọfesọ Mahadum Heidelberg, Trobisch na-arụkwa ọrụ dị ka onye nnọchi anya na-agagharị agagharị na ụwa nke ụlọ akwụkwọ dị elu na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị elu. Ọnụnọ ya bụ ihe na-akpata nsogbu nye ndị na-akatọ Greens: Dị ka ndị kwere ekwe na Akwụkwọ Nsọ sitere n'aka Chineke na enweghị ike ịgbanwe agbanwe, ndị ezinụlọ - yana ụlọ ngosi ihe nka nke ha nwere ọgụgụ isi - ga-enwe ike imeghe ohere agụmakwụkwọ karịa ka ekwuru na mbụ?
Trobisch kọwara mmekọrịta ya na ụlọ ngosi ihe nka na Steven Green dị ka "ndị otu abụọ guzo n'akụkụ abụọ nke ụdị Ndị Kraịst na-agwa ibe ha okwu ma na-arụkọ ọrụ ọnụ. Ihe a fọrọ nke nta ka ọ ghara ime na US ”Ọ na-akwado izi ezi nke ụlọ ngosi ihe nka site na-ekwusi ike na ụkpụrụ ọ gaghị eso ndị ọrụ mgbasa ozi:“ Ọ bụrụ na ekpughere ụlọ ngosi ihe nka ka ọ bụrụ “ụdị ọrụ ozi ala ọzọ,” ka o kwuru, “Ọ ga-abụ nnukwu ndakpọ olileanya. Enweghị m ike ịchọpụta ma ọ bụ rụọ ọrụ maka ụlọ ngosi ihe nka nke chọrọ ime nke ahụ ”(Van Biema 2015).
Boorstein, Michele. "Hobii paseeji's Steve Green nwere nnukwu atụmatụ maka Ebe Ngosi Ihe Mgbe Ochie nke Bible ya na Washington." 2014. Washington Post , September 12. Nweta site na http://www.washingtonpost.com/lifestyle/magazine/hobby-lobbys-steve-green-has-big-plans-for-his-bible-museum-in-washington/2014/09/11/52e20444-1410-11e4-8936-26932bcfd6ed_story.html na 10 May 2015.
Caplan-Bricker, Nora. 2014. "Onyeisi Ntụrụndụ Hobby Na-ewukwa Ebe Ngosi Ihe Mgbe Ochie Bible maka Ihe karịrị $ 70 Nde." New Republic, March 25. Nweta site na http://www.newrepublic.com/article/117145/museum-bible-hobby-lobby-founders-other-religious-project on 10 March 2015 na 10 May 2015.
Grossman, Cathy Lynn. 2014. "Hobii paseeji si Steve Green guzo na okwukwe megide Obamacare iwu." Akụkọ Okpukpe, Machị 17. Nweta site na http://www.religionnews.com/2014/03/17/hobby-lobby-steve-green-scotus-contraception/ na 10 May 2015.
Lindsey, Rachel McBride. 2014. “Ebe odide: Otu nlele anya na Museum Hobby Lobby Family’s Bible Museum. Okpukpe na Ọchịchị, ”Septemba 24. Nweta site na
http://religionandpolitics.org/2014/09/24/passages-a-glimpse-into-the-hobby-lobby-familys-bible-museum/ na 10 May 2015.
O'Connell, Jonathan. 2015. "Ọbụna ndị na-ekweghị ekwe nwere ike ịga leta $ 400 Million Museum of the Bible." Washington Post, February 12. Nweta site na http://www.washingtonpost.com/news/digger/wp/2015/02/12/even-non-believers-may-want-to-visit-the-400-million-museum-of-the-bible/ na 10 Mee 2015.
Ntughari, Alan. 2014. "Ezinụlọ nke Nwere Mmasị Mmasị Na-eme Museumlọ Akwụkwọ Ezumike nke Washington. New York Times, July 16. Nweta site na http://www.nytimes.com/2014/07/17/us/politics/family-that-owns-hobby-lobby-plans-bible-museum-in-washington.html?_r=0 na 10 May 2015.
Onye-nketa, Rebecca 2015. "Ebe ngosi ihe mgbe ochie nke DC Bible ga-abụ ahụmịhe bara ụba, ndị na-ahazi kwuru. " Npr, February 25. Nweta site na
http://www.npr.org/2015/02/25/388700013/d-c-bible-museum-will-be-immersive-experience-organizers-say na 10 May 2015.
Solomọn, Brian. 2012. "David Green: Onye Billionaire nke Akwụkwọ Nsọ Na-akwado Movementka Evangelical." Forbes, October 8. Nweta site na http://www.forbes.com/sites/briansolomon/2012/09/18/david-green-the-biblical-billionaire-backing-the-evangelical-movement/ na 10 May 2015.
"Billionaires Worldwa: # 246 David Green." 2015. Forbes. Nweta site na http://www.forbes.com/profile/david-green/ na 10 March 2015.
Van Biema, David 2015. “David Trobisch na-agbazinye Green Museum’s Bible Museum nke Ndị Ọzụzụ.” Religion News, April 27. Nweta site na ttp: //www.religionnews.com/2015/04/27/david-trobisch-lends-green-familys-bible-museum-scholarly-edge/.
Zauzmer, Julie. 2018. "Ihe karịrị 500,000 Ndị Mmadụ Agaala thelọ Ngosi Ihe Mgbe Ochie nke Bible na ọnwa isii mbụ ya." NdiAkwụkwọ ozi hington, Ka 18. Nweta site na https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2018/05/18/more-than-500000-people-have-visited-the-museum-of-the-bible-in-its-first-6-months/?utm_campaign=27f85d7e01-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_21&utm_medium=email&utm_source=Pew%20Research%20Center&utm_term=.3c7e7782500a na 24 May 2018.